XOMBORETTII-Asoosama Gaggabaaboo-Abdiisaa Balachoo’tiin-Asoosamni kalaqa jiruuf jireenya uummataa dubbatudha! – Beekan Guluma Erena
XOMBORETTII-Asoosama Gaggabaaboo-Abdiisaa Balachoo’tiin-Asoosamni kalaqa jiruuf jireenya uummataa dubbatudha!	Beekan Erena
AFOOLA/OROMO FOLKLORE, Asoosama, Audio/Video/Image Category, Language Category, Personal Category, Politics Category January 13, 2017Oromo Revolutions
38SHARESKana TamsaasiKana Tamsaasi
Asoosamni kalaqa jiruuf jireenya uummataa dubbatudha!
Barruun kun asoosama gabaabduu yoo taatu kutaa sadiitti qoodamtee isiniif dhihaatti. Amalli keessan ilalamees itti isiniif dabalamuu mala. Har’aaf garuu kutaan jalqabaa kunooti.
Abaan warraa koo ganamaan qarshi bilbilli manaa keenyaa lakkaa’e kaffaluuf erga ba’een booda ture, xomboreen mana koo biddiiqxuun meeshaa ishee sassaabbattee yoo deemuuf qophooftu kanan arge.
“Maal taate intalaa? Eessa deemuuf jetta?” Jedheen osoo natti hin himin tasuma lafaa kaatee qoqophaa’uun ishii kun bita natti gallaan.
“Yoo isin qarshii dhibba shan naaf hin kaffaltan ta’e kanarra mana kana hin taa’u!” Jette uuruu dhiibaa. Sanuu akkaataan dubbii ishii kan duraarraa jijjiirameera. Miiruma isiin ittiin haasoftuuyuu kabajaafi ulfina anaaf qabdu of keessaa hurkisiseera.
“eeee… waan haaraa maaltu argamnaan altokkoon qarshii dhibba sadii itti dabaltu malee naan jetta intalaa? Mee natti himimee?” Yoon jedhuun,
“maal taate giiftiin immoo isayyuu waan haaraa maaltu argeme jettuu?” Jechaa erga meeshaashee walitti qabatte lafa godhatteen booda
“Sababa gurguddaa sadiin qabayyuudha kanan qarshii dhibba sadii dabaleef.” Jettee qubashii sadi na agarsiiste
“Mee natti himi adaraa.. Kan kee hoo raajiidha!” Jedheen amala ishiin hn qabne irratti ilaalaa…
“Tokkoffaan..” Jette qubashee sadan agarsiiste keessaa tokko gadi qabaa..
“Tokkoffaan huccuu tokkosuudhaan isinirra nan caala.” Naan jette qaanii malee of tuula..
“Dhugaa jettaa.. ?! Eenyu kan akkas jedhee sitti himemmoo?”
“Maal taate giiftiin immoo gooftaafaadhaka.. Kan biraa eenyuutu natti hima?”
“Toole lammaffaa noo?”
“Lammaffaan immoo nyaata mi’aawaafi gaarii ta’e hojjechudhaanis isinirrra akkan wayyus gooftaanfaa irra deebi’anii natti himaniiru.. Sababni kiyya inni guddaafi inni dhumaas immoo..” Jettee qubashee isa sadaaffaa qofaa hafe erga gad deebisteen booda,
“Tapha siree gubbaattis isinirra akkan caalu waan natti himameefi..” Naan jette qaanii malee.. Nan rifadhe… fuula kiyya dura waatu ‘balaq’ jedhee onnee na danfisnaan aariidhaan sagalee ol fudhee..
“Eenyuutu akkas siin jedhe intalaa..? Isas gooftaafaadhaa..? Siinan jedhaam!” Yoon jedhuun,
“Lakki” jette na sodaataa. Dheekkamsa koon rifattee walitti shuntuurteetti.
“Eenyuutu akkas jedheree….?”
“iiii.. Eenyuutu jedhe jettanii..?” Harkashee lamaan qomatti qabattee walitti sukkuumaa..
“Eeyyee eenyuutu jedhen siin jedhaam?”
“iiiiiii….waardiyyaa keenya garafaadha.. Isatu natti hime” jette takka ija koo takka lafa.. Ilaalaa..
Miiran ittiin dheekkamaa ture keessaa tasuma darbatamee ba’een waan jedhuufi godhu of harkaa dhabe.
“Qarshii meeqa ture amma kan ati naaf kaffali jette?” Jecha jedhu qofa ture kan afaanitti na dhufe.
“Dhibba shan” jette biddiiqxuun gammadaa.. Kanuma gidduun abbaan manaan kiyya miira aarii of keessaa qabuun balbala humnaan darbatee banuun “Akkamitti?” Jechaa dheekkamaa ol seene, sagalee ol fudhatee……
Isanni balbala rukutee,
“akkamitti!?” Jechaa ol seenu bakkan lixun dhabe… onneen kiyya ariitii durii caalaa saffisaan rukutuu eegale. Dhaabbatee dhaggeeffataa waan ture natti fakkateera… garuu amma inni jecha biraa afaanii baafatutti miiruma rifaatuu keessa dhaabbadheen eegee.
“waanumti mana keessatti adeemsifamaa jiru naaf hin galle.. Maaluma jechuudhan jedheem an!?” Jedhe mudhiisaa lamaan qabatee. Hiddi mormaafi addasaa jabaataniiru.
“maaltu maal ta’e?” Sagalee koo sassaabbadheen… suuta dubbadhe.
“maaltu maal ta’ee maal na gaafatta? Atuu nii beekta!” Jedhaa waraqaa biilii bilbilaa harkasaa keessa jirtu mirmirsaa..
Biddiiqxuun ol darbite…
“mee ilaali kana…” jedhee biilicha erga natti hiixateen booda,
“ji’atti bilbilaaf qarshii kuma tokko kaffaluu jechuun maal jechuudha..?” Jedhee na tasgabbeesse… hafuura dheeraan baafadhe. Amma mata dureen haasaa isaa kan biraa waan ta’eef,
“maal jechuudha..? Akkamitti ta’a?” Jedheen gargaare anis laphee kiyya dha’atu qabataa.
“ani maalittan beekaree? Of gaafadhuka..! Ana yoo ta’e silaaa atuu ni beekta. Bilbila kamiyyuu yoo ta’e kan waajjira keenyaan fayyadama malee tasa ji’a kana kan mana kanaarraa bilbilee hin beeku… dhimma ariifachiisaan galgalaan yoo na mudatellee, bulchee ganama waajjira koo deemee akkan bilbilu atiyuu ni beekta natti fakkaata?”
“”eeyyee nan beeka.. Garuu dhugaadha anis ji’a kana bilbilee hin beeku.. Guyyaa tokkollee itti hin buune.. Anis waajjirumaatin bilbiladha malee.. Boo’icha hiriyyaa kootii himuufiyyuu bilbiluma waajjira keenyaan gargaaramaa ture.” Jedheen akka inni caalatti na amanuuf..
“eenyuutu bilbillaan qarshii kuma tokko nurratti lakkaa’eree?” Jedhe ariidhaan of nyaataa.
“irra deebinee ilaalla malee.. Dogggora ta’uu mala.” Yoon jedhuun..
“mee biddiiqxuufi garafaa naa waami!” Jedhe.. Utuun hin waamin garuu ofiimasaan sagalee olfudhatee waamnaan dhufan.
“garafa.. Bilblila mana kanaa bilbiltee beektaa..?”
“lakki du’a harmee.. Tasumaa itti hin buune.. Ani. Ani balbala gubbaan ta’a yooman mana kana ol seenee beeka.. Dhugaan isiniin jedha.. Yooma giiftiin akka carraa na waamten ol seena malee.. An mana kana dhufee bilbila tuqee hin beeku..” Jechaa falmate garafaan ija keessa na ilaalaa.
“tole atoo..?” Jedheen biddiiqxuudhaan….
“iii.. Ani moo..?”
“kan waajjira kootii waan ta’eefika… kan mana warra kootii fayyadamuurra… kanumaanin waanan barbaadu xumuradha..”
“akkasii..” Jedheema aruu dhiisee biilicha teessuma gubbaa godhuun kutaa hirribaatti ol darbe. Maalif akkanatti aaraa dhufee isheen bilbiladhe jennaan akka tasgabbaa’e garuu shakkii natti naqe.
About Latest Posts Beekan ErenaTeaching, Writing and editing at Books Latest posts by Beekan Erena (see all)	Dr.Rundaasaa Asheetee Hundee:ITOOPHIYAAMOO SEERRI ITOOPHIYAA HAADIIGAMTU JENNE? Ibsa Dr. Qadiidaa Faana taasisan daawwadhaa!! - May 29, 2017	Caamsaa 20 Gaadituu Bilisummaa Saboota Cunqurfamoo May 29, 2017By Qeerrooin Oduu/NewsLeave a comment Caamsaa 28 2017 Dachaasaa Deebisaatiin - May 29, 2017	Dr. Rundaasaa Asheetee Hundee:Wallaggaa against Arsi; Our enemy’s last attempt to weaken the Oromo liberation movement - May 29, 2017	Kana Tamsaasi:TweetEmailPrint
Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa38SHARESKana TamsaasiKana Tamsaasi
← Dr. Awol Allo -QOPHII KAAYYOO-Xiinxala Dhimmoota Oromoo waliin walqabatanirratti dubbate Amajjii, 2017
MUUSAA DAWUD: Kan Jiru haa Dubbatu! Seenaa Immiru Ibsaa fi Jaalleewwan Isa Waliin Wareegaman. →
Posts	Dr. Rundaasaa Asheetee Hundee:ITOOPHIYAAMOO SEERRI ITOOPHIYAA HAADIIGAMTU JENNE? Ibsa Dr. Qadiidaa Faana taasisan daawwadhaa!!
Caamsaa 20 Gaadituu Bilisummaa Saboota Cunqurfamoo May 29, 2017By Qeerrooin Oduu/NewsLeave a comment Caamsaa 28 2017 Dachaasaa Deebisaatiin
Dr. Rundaasaa Asheetee Hundee:Wallaggaa against Arsi; Our enemy’s last attempt to weaken the Oromo liberation movement
HAQA/DHUGAAN MAALI?/FARRI DHUGAA MAALI? . Biqilaa/Kitaaba Duudhaa’ jedhurraa kan fudhatame!
//www.facebook.com/DrRaayyaa/: Ogeeyyiin Fayyaa Oromoo maal nuunjedhu? Hidhaa kanaa gadii tuquun irra baradhaa!!
Inginer Ganamoo Ibirhaam; GGO irratti maal dubbate? Maanguddoon OLC fi GGO gidduutti maal murteessan. Eenyutu dide? Qaanqee Show faana!
Politics Category (318)
CommentsDereje Nemomsa on Seenaa Abdiisabaa, Eebba Boodaa:Abdiisaan Ogeessa koompiwutaraa(IT)-Ogeessi Takinooljii kun Nuuf haabarbaadamu-Forever on HIDHAA JAALALAARusty on Maqaa OromooIrene on Seenaa Abdiisabaa, Eebba Boodaa:Abdiisaan Ogeessa koompiwutaraa(IT)-Ogeessi Takinooljii kun Nuuf haabarbaadamu-Abdi Y Ayana on HIDHAA JAALALAA	Recent Posts	Dr. Rundaasaa Asheetee Hundee:ITOOPHIYAAMOO SEERRI ITOOPHIYAA HAADIIGAMTU JENNE? Ibsa Dr. Qadiidaa Faana taasisan daawwadhaa!!